I-Anatase iyindlela yezimbiwa engafinyeleleka ye-titanium dioxide - ividiyo
Thenga ama-anatase wemvelo esitolo sethu
I-Anatase ifomu lamaminerali elinganiselwe le-titanium dioxide. Izimbiwa ngezindlela zemvelo zivame ukuhlangatshezwa njenge-black solid, yize okumsulwa kunganombala noma kumhlophe. Ezinye izinhlobo ezimbili zamaminerali ezenzeka ngokwemvelo ze-TiO2 ziyaziwa, i-brookite ne-rutile.
I-Anatase ihlala itholakala njengamakristalu amancane, ahlukile futhi athuthukiswe ngokuqinile, futhi njenge-rutile enzinzile ye-thermodynamically, ikhala ohlelweni lwe-tetragonal. Itshe Eliyigugu lingafinyeleleka kuwo wonke amazinga okushisa nezingcindezi, libe yi-polymorph elinganayo. Noma kunjalo, i-anatase ivame ukuba yisigaba sokuqala se-titanium dioxide ukwenza izinqubo eziningi, ngenxa yamandla ayo aphansi angaphezulu, ngokuguqulwa kokungasebenzi okwenzeka emazingeni okushisa aphakeme. Yize izinga lokulinganisa lilingana kuzo zombili izigaba ze-anatase nezonakalisayo, akunobudlelwano phakathi kwama-engles angaphakathi kwezimbiwa ezimbili, ngaphandle kwephritha-45 ° ne-90 °. Iphiramidi ejwayelekile ye-anatase, ehambisana nobuso obukhona ubuhlakani obuhle, inekona elingaphezu konqenqema lomhlaba olungama-82 ° 9 ′, i-angle ehambisanayo yoshoti ibe ngu-56 ° 52½ '. Ngenxa yalolu phiramidi olunamandla,
Imikhuba emibili yokukhula yamakristalu e-anatase ingahlukaniswa. Okuvame kakhulu ukwenzeka njengamaphiramidi alula acute aphindwe kabili anemibala eluhlaza okwesibhakabhaka kuya kombala omnyama nokugqwala okuqinile. Amakristalu alolu hlobo aningi e-Le Bourg-d'Oisans eDauphiné, lapho kuhlotshaniswa khona ne-rock-Crystal, feldspar, kanye ne-axguma ku-crevices ku-granite ne-mica-schist. Amakristalu afanayo, kepha ngosayizi omincane kakhulu, asatshalaliswa kakhulu emadwaleni asezingeni, njengama sandwich, ama-clays, kanye nezisekelo, lapho kungahlukaniswa ngokuhlanza izindawo ezilula zedwala oluyimpuphu. Indiza ye-anatase ingumphezulu ozinze kakhulu we-thermodynamically futhi yingakho isici esidalulwe kakhulu ku-anatase yemvelo neyenziwe.
Amakristalu ohlobo lwesibili anobuso obuningi be-pyramidal abakhiwe, futhi bavame ukuthopha noma kwesinye isikhathi bumkhuba omnandi, umbala uluphuzi uluju-nsundu lube nsundu. Amakristalu anjengalawa afana kakhulu nokuqothuka kwe-xenotime ngokubukeka futhi, empeleni, kwakuyisikhathi eside okuthiwa ayengokwalolu hlobo, igama elikhethekile elithi wiserine elalisetshenziswa kubo. Zisondelene nezindonga zemifantu egqume ezintabeni ze-Alps, iBinnenthal eduze kwaseBrig e-canton Valais, eSwitzerland, okuyindawo eyaziwayo. Ama-pseudomorphs avela ngokwendalo ka-rutile ngemuva kwe-anatase ayaziwa.